ဖန်ထည်အပူကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသည့် nano-ပစ္စည်းများသည်အထူးကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အနီအောက်ရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များတွင်အတားအဆီးများနှင့်မြင်နိုင်သောအလင်းဒေသတွင်မြင့်မားသောထုတ်လွှင့်မှုရှိသည်။ ၎င်းပစ္စည်း၏ပွင့်လင်းသောအပူကာကွယ်နိုင်သည့်ဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြု၍ ၎င်းသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောအပူကိုကာကွယ်ပေးသောအဖုံးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဖန်အလင်းရောင်ကိုမထိခိုက်စေသည့်အဓိကအကြောင်းရင်းအရ၎င်းသည်နွေရာသီတွင်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်အအေးပေးခြင်းနှင့်ဆောင်းတွင်း၌စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်အပူထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည့်အပူလျှပ်ကာပစ္စည်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းသည်သုတေသီများ၏ရည်မှန်းချက်အမြဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပစ္စည်းများအစိမ်းရောင်အဆောက်အ ဦး စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်မော်တော်ကားဖန်အပူ insulator တွင်လည်း -nano အမှုန့်နှင့်မြင့်မားသောမြင်နိုင်အလင်းထုတ်လွှတ်မှုရှိသည်နှင့်အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းထိရောက်စွာသို့မဟုတ်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည့်အလုပ်လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်၏လယ်ပြင်၌အလွန်ကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာအလားအလာရှိသည်။ ဤတွင်အဓိကအားဖြင့် cesium tungsten bronze nanoparticles များကိုမိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများအရ၊ indium tin oxide (ITOs) နှင့် antimony-doped tin oxide (ATOs) film များပွင့်လင်းမြင်သာသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုပွင့်လင်းသောအပူလျှပ်ကာပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း၎င်းတို့သည် 1500nm ထက် ပို၍ လှိုင်းအလျားအနီးရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းအားပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ Cesium tungsten bronze (CsxWO3,0＜x ＜1) သည်မြင်နိုင်သောအလင်းထုတ်လွှတ်မှုမြင့်မားပြီး 1100nm ထက်ကြီးသောလှိုင်းအလျားများနှင့်အလင်းကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် ပို. ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်ဒါ cesium အဖြိုက်နက်ကိုကြေးဝါ၎င်း၏အနီး-အနီအောက်ရောင်ခြည်စုပ်ယူမှုအထွတ်အထိပ်တစ်ဦးအပြာပြောင်းကုန်ပြီရှိပါတယ်, ATOs နှင့် ITOs နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။
cesium tungsten ကြေးဝါ nanoparticlesအခမဲ့သယ်ဆောင်သူများနှင့်ထူးခြားသော optical ဂုဏ်သတ္တိများမြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည်မြင်နိုင်သောအလင်းတန်းတွင်ထုတ်လွှင့်မှုမြင့်မားပြီးအနီအောက်ရောင်ခြည်အနီးရှိပြင်းထန်သောဒိုင်းကာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် cesium tungsten bronze transparent cesium tungsten bronze သည်ပွင့်လင်းသောအပူကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ အလင်းရောင်အားမထိခိုက်စေဘဲကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်သောအလင်းထုတ်လွှတ်မှုကိုသေချာစေပြီးအနီးအနားရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်မှရရှိသောအပူအများစုကိုကာကွယ်နိုင်သည်။ cesium tungsten bronze system တွင်အခမဲ့သယ်ဆောင်သူအမြောက်အများ၏စုပ်ယူနိုင်မှုကိန်းαသည်အခမဲ့သယ်ဆောင်သောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်စုပ်ယူထားသောအလင်း၏လှိုင်းအလျား၏စတုရန်းနှင့်ညီမျှသောကြောင့် CsxWO3 ရှိ cesium ပါဝင်မှုသည်တိုးပွားလာသောအခါအခမဲ့သယ်ဆောင်သူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အဆိုပါစနစ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်, အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်ဒေသအတွက်စုပ်ယူမှုတိုးမြှင့်ပိုပြီးသိသာသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် cesium tungsten bronze သည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်၎င်း၏ cesium ပါဝင်မှုမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှတိုးလာသည်။